वागीश्वरी माविलाई रु. दश लाख अनुदान | नुवागी
भक्तपुर । भक्तपुरको च्याम्हासिँहस्थित वागीश्वरी माध्यमिक विद्यालयले रु. दश लाख प्राप्त गरेको छ । जिल्लाका १ सय ३४ सरकारी विद्यालयमध्ये एकहजार बढी विद्यार्थी पढिरहेका विद्यालयको लिस्टमा वागीश्वरी मावि परेपछि विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक सुधारका लागि भन्दै रु. दश लाख अनुदान दिइएको हो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ भक्तपुरका प्रमुख हरिप्रसाद दाहालले विद्यार्थी बढी भएका विद्यालयलाई विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाअन्तर्गत रु. १० लाख रकम अनुदान दिने कार्यक्रम अनुसार रकम दिइएको जानकारी दिए ।
‘देशभरका ७७ जिल्लामध्ये भक्तपुरमा पनि एकहजार बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालय रहेको छ । जिल्लाका विद्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी विद्यार्थी पनि वागीश्वरीमा रहेको तथ्यांक छ ।’ इकाइ प्रमुख दाहालले भने ।
उनले विद्यार्थी संख्या भएकै आधारमा आर्थिक अनुदान पनि उपलब्ध गराएको बताए ।
वागीश्वरी माविमा अहिले ३ हजार ५ सय ३७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । साविकको शिक्षा विभाग हुँदै इकाइमार्फत् प्राप्त सो रकमलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने काममा खर्चिने योजना रहेको विद्यालयले जनाएको छ ।
‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि बढाउने काममा उक्त रकम खर्च गर्ने, खेलकुद सामग्री व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने र सूचना प्रविधिको विकासका लागि खर्च गर्ने निर्णय भएको छ, सोही निर्णयअनुसार काम पनि अघि बढिसकेको छ ।’ विद्यालयका सहायक प्रअ ज्ञानसागर प्रजापतिले भने ।
यता साविकको शिक्षा विभागका अनुसार एकहजार बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयको संख्या जम्मा ३ सय ८९ छ ।
वागीश्वरी माविका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद धन्छाले सो अनुदानले विद्यालयमा प्रयोगशाला र पुस्तकालयको विकासमा लगानी गरिने बताए ।